Wordpress: Mitantana doka miaraka amin'ny mpanolotsaina | Martech Zone
Alatsinainy, 9 Jona, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Isaky ny manandrana doka sasany ato amin'ny tranokalako aho dia voatery nanantona ilay mpamorona lohahevitra foana ary manitsy ny kaody fototra amin'izy ireo… zavatra mampihetsi-po ahy kely. Nisedra plugins doka vitsivitsy ho an'ny bilaogiko WordPress aho, saingy tsy nisy natanjaka na dia iray akory aza.
Tamin'ity herinandro ity dia hitako ny zavatra ilaiko tamin'ny alàlan'ny plugin fitantanana doka WordPress mahafinaritra, antsoina hoe Ad-minister.
Ny interface ho an'ny Ad-ministra dia tsy dia mailaka loatra, fa ny lafin-javatra tonga lafatra. Ireto ny dingana mankany amboary ny ad-minisitra, zahao ny tranokalan'ny mpanoratra ho an'ny antsipiriany fanampiny:
Mametraka ary mampihetsika ny plugin.
Ampidiro ny kaody ilaina amin'ny lohahevitrao, aza hadino ny mametraka famaritana tsara momba ilay toerana - indrindra raha manana faritra maromaro ianao:
'Banner ambony', 'description' => 'Ity no banner eo an-tampon'ny pejy', 'before' => '> div id = "banner-top">', 'after' => '> / div> '); do_action ('ad-minister', $ args); ?>
Mandehana any aminao mitantana tabilao ary mifidiana Ad-minisitra.
Tsindrio ny Toerana / Widgets vakizoro ary tokony ho hitanao izao ireo toerana rehetra nampidirinao tao anatin'ny famolavolana lohahevitrao.
Tsindrio izao Mamorona atiny. Alefaso ny kaody anao, safidio ny toerana tianao hampisehoana azy dia mandeha ianao ary mihazakazaka. Aza hadino ny manisy lohanteny ny atiny ampy hanavahana ny dokanao.
Mandeha ary mihazakazaka ianao izao!
Ny plugin koa dia manana fampiasa fanampiny toy ny daty daty, isan'ny tsindry sns. Plugin tena matanjaka izy io izay manana izay ilainao rehetra amin'ny fitantanana doka mora foana amin'ny WordPress blaogy!
Tags: hyperlocalFikarohana MySQLfisondrotanaschwagStumbleUponWalmart
Manohy mamono tena tsy misy antony ireo gazety
Jun 10, 2008 ao amin'ny 12: 26 PM
Vao nanomboka ny orinasako manokana aho ary manao fikarohana momba ny fomba fanaovana dokambarotra tsara indrindra. Nahita ity bilaogy ity aho ary tena tiako ny hevitr'ity programa ity amin'ny fanampiana ireo orinasa madinika hanomboka amin'ny dokam-barotra tsara kokoa. Tsy maintsy hijery bebe kokoa an'io fampahalalana io aho. Izaho koa dia mitady doka hafa "fanampiana" antsoina hoe Glyphius? Efa renao ve izany? Misaotra nizara eritreritra sy nanome ahy toro-hevitra mahafinaritra hafa momba izay hojerena!